Friday Sermon: Objectives of Jalsa Salana (Annual Convention) - 28th June 2013
Fida Nyamesɛmka: Ayɛwoho 5, 2013.
(Friday sermon – 5th July, 2013 – Fante Translation)
NYANKOPƆN NE NHYIRA-GERMANY NSERAHWƐ.
Anohoba Mɛsia (ANN) ne awensɛm tsia a ͻkyerɛwee ne nkyerɛasee kyerɛdɛ:
O! Ɔdomfo Ewuradze mebɛyɛ dɛn m’akyerɛ me ndaase a onnyi kabea akyerɛ Wo.
Na henfa na mefrɛ m’anowerba fi a obotum dze me ndaase a no mu kye ama!
Ɔyɛ dzen dɛ ebotum ada Nyankopͻn ase wͻ Ne nhyira na N’enyimpa ntsi. Nserahwɛ biara a Hadhrat Khalifatul Masih kͻ no nya Nyankopͻn Ne nhyira na N’enyimpa wͻ akwan soronko mu. Ɔnnkyɛree biara ͻkͻr Jalsa Salana a wͻyɛɛ no wͻ Germany, na Jalsa hͻ no, ͻnye mbeambea bi so, onyaa esuahun wͻ Ɔdomankoma Nadom na Ne nhyira ho a ͻhyɛɛ gyedzi a ͻkyerɛ dɛ daapem Nyankopͻn No bͻ no a ͻhyɛɛ no wͻ Anohoba Mɛsia (ANN) ho no ba mu wͻ enyimnyam fofor mu.
Ameer a ͻwͻ Germany no kaa dɛ dza ohunii biara boor n’adwen do, ͻno nye ne nsafoo. German amamba na hͻn dawurbͻ asoɛe kyerɛɛ hɛn enyigye soronko a wͻto no abaw a onnhyia. Nkorͻfo a wͻwͻ apaamu apaamu, tumdzifo na Kristian asͻfo a wͻbaa bea a wͻpaa asͻrfi ho tam anaa wͻtoow asͻrfi fapem no kyerɛɛ enyigye soronko. Nyankopͻn N’adom a odwiir Jalsa hͻ no, nkorͻfo kyerɛɛ dɛ ͻnntͻ ka. Onyimpa n’adwen nnkotum atse Ɔdomankoma nhyira ase; dza osii Germany hͻ dze ne saso nnka; ampaara dɛ enyida do dɛ obedzi mu naaso mbrɛ Nyankopͻn sii hyiraa ehyiadzi no do no nna ͻbor do.
Dɛ mbrɛ oeenya no ntͻyɛɛ no, Hadhrat Khalifatul Masih kasae faa Ɔdomankoma nhyira ho ber a ͻdze ne nserahwɛ no kͻr ewie no. Ɔyɛ no kusum so dɛ ͻda Jalsa edwumayɛfo no ase na ͻnyaa pɛ dɛ ͻyɛ dɛmara so nda da yi. N’akwantu yɛɛ tsiabaa; odzii dadu na ber yi mu no ͻpaa asͻrfi ebien ho tam na ebien so ͻtoo fapem. Nyankopͻn N’adom ara nkekano nhyiamu a dɛm ber yi wͻyɛɛ no kͻr yie mbordo mbordo na ͻmaa adwen bi a onnsi kwaa a nkorͻfo binom enya wͻ asͻrfi ho no pepaa fii hͻ. Wͻtoo Masjid Subhan a ͻwͻ Morferden ne fapem na Masjid Baitul Ata dze wͻpaa ho tam. Dan bi a woesi no dada na wosiesiee no daan no yɛɛ Asͻrfi. Jama’at a wͻwͻ hͻ no dze kwasafodwuma (Waqr-e-amal) siesiee asͻrfi no; na wodzii dͻnhwer mpem esoun wͻ ho. Baitul Raheem a ͻwͻ Neuweid nye asͻrfi kor so a wͻpaa ho tam no. baitul Hameed a ͻwͻ Fulda no wͻtoo ne fapem. Dɛm ndzeyɛɛ yi apaamu ahwɛdofo, aban edwumayɛfo banodzifo, amanyɛ na asͻr mpanyimfo baa ase.
Ber a wͻrepa Baitul Ata ho tam wͻ Florsheimam Main no Hesse mansin mu hwɛdofo no kaa dɛ ber a wͻrubuei Jamia Ahmadiyya no ͻkͻͻr ase. Ɔkaa Ahmadiyya nkyerɛkyerɛ na hͻn su ho nsɛm. Ɔdaa Jama’at no ase wͻ hͻn nhyehyɛɛ a ͻkyerɛ Islam supa ho, bi nye anamͻntwa nantsew a ͻkyerɛ ͻdͻ; kaar kwanmu nsiesie na dza ͻkeka ho. Germanfo ahaebien eduosoun na wͻtoo nsa frɛɛ hͻn ma wͻbaa asͻrfi yi ne mbuei ase; apaamu ahwɛdofo anan, ͻsoafo, amanyɛfo na mbrahyɛ baguafo, asͻfo, polisi panyin na apamfo a wͻhwɛ kurowpͻn no do
Ber a wͻretow Baitul Hameed ne fapem no, apamfo a wͻhwɛ kurowpͻn do no hͻn eguamutsenanyi ka dɛ, Ahmadiyya Kuw no ka Fulda kurowpͻn no ho. Ɔdaa no edzi dɛ onyim hɛn dwumadzi na ͻwͻ atsenka dɛ woesi asͻrfi Fulda no kyerɛ dɛ yɛwͻ pɛ dɛ yɛdze hɛn ho hyɛ amanfo hͻn dwumadzi wͻ kurowpͻn mu hͻ. Ɔkyerɛɛ dɛ nnyɛ ͻtse nsɛmpa wͻ Ahmadiyyafo ho nko, mbom dɛm nsɛm yi wͻdze kͻ nyɛɛ mu eso wͻyɛ nkorͻfo a wodzi mbra do.
Obi a ͻwͻ apaamu hͻ a oedzi mfe eduowͻtwe biako kaa dɛ dza Khalifatul Masih aka no nnyɛ ne nyinara na ͻbɛba mu ber yi a ͻtse ase yi, mbom wiadze nam no do bɛgye nyia ͻdze Ahmadiyya bͻbͻͻ adze no ne nsɛm ato mu. Dɛm opanyin yi, adzekyee no ͻsanee baa bɛkaa dɛ oeehu nyamsom no no nokwardzi wͻ n’akoma mu. Ɔserɛɛ dɛ wͻbɛkyerɛ no asͻryɛ ama ͻayɛ asͻr. Opanyin a ͻhwɛ apaamu hͻ yiedzi do no kyerɛɛ ne pɛ dɛ Hadhrat Khalifatul Masih bͻkͻ akɛsera edwuma n’asoɛe hͻ. Ɔkaa dɛ nkorͻfo faa Huzur ne kasaa no dɛ no mu dahͻ petee a ͻhyerɛn wͻ nyimdee mu eso otu kafo. Sadr no a ͻwͻ apaamu hͻ no kyerɛ dɛ mbrɛ nkorͻfo ridzi hͻ akͻnaba ara nye yi dɛ wͻrobͻhwɛ asͻrfi no. Dͻm a wͻbor ahaenum abͻhwɛ hͻ a wͻakyerɛ pɛ mapa wͻ Islam ne nkyerɛkyerɛ mu.
Basia bi kaa dɛ ͻyɛ no enyigye dɛ Hadhrat Khalifatul Masih ne kasaa no kyerɛ Islam na Kristiansom ntseasee. Ɔkaa dɛ nsonsonee kumaabi na ͻda nsͻrbansͻrba ntamu, ne kɛsenara wͻnam kwan kor do. Obi so a wͻtoo nsa frɛɛ no kaa dɛ Hadhrat Khalifatul Masih akasa akyerɛ dɛ Islam yɛ asomdwee som wͻ ne kasaa a ͻaka no dada mu na iyi yɛ ehiasɛm a ͻtaa ka. Obi so kaa dɛ ͻyɛɛ no enyigye dɛ ͻtsee nsɛm a ͻfa no ͻdͻ ho a wͻkaa no mpɛn pii wͻ nhyiamu no ase. Ɔkaa dɛ ͻyɛ Kristiansom ne fa bi a wͻfrɛ no Protestant kadofo a okenyan noho yie na ͻdͻ yɛ ehiadze ma no papaapa na mbom ͻyɛ no dɛ ͻnntse dɛ wͻbͻ dzin wͻ n’asͻrfi mu pii dɛ mbrɛ ͻ’atse no wͻ ha yi. Ɔkaa dɛ ͻtsee ͻdͻ kɛse nka wͻ no mu wͻ hͻ. Ohuun dɛ nkorͻfo a wonnyi adwentsen wͻ Islam ho no, ͻyɛ a nna wonnyim Muslimfo mbrɛ wͻtse.
Hadhrat Khalifatul Masih nye TV na dawurbͻ nkrataa edwumayɛfo dzii mbisase. Hͻn a wͻnye no dzii ehyia no hͻn dodow nye iyinom; dawurbͻ nkrataa ahorow eduosa, radio asoɛe ebiasa na TV soronko enum na wͻdze ne nsɛm too gua. Ber a odzi kan a German Ɔman no ne TV twee Jama’at no hͻn nsɛm. Hɛn nsɛm dur nkorͻfo a hͻn dodow bɛyɛ ͻpepe kor na ahaebien: dɛm ber no ara so German Ɔman TV no daa Jama’at no edzi na wͻdze Huzur ne mfonyin too do ma wͻtsee ne nsɛm.
TV bi so a wohu no wͻ Switzerland na Austria so twee nsɛm no ma aman ebiasa hͻn nsa kaa nsɛm no a nna German Jamaat no hͻn enyi nnda. Dawurbͻ krataa bi dze too gua dɛ Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ bea bi a nkyɛ woker sika tͻ adze no, dan a wͻadan no asͻrfi yi nna ͻyɛ guadzibea; na dɛ wͻadan no asͻrfi yi ͻyɛ sunsum mu edwuma a woenntua hwee. Jama’at siesieara dze woenya gyinabew wͻ German Ɔmandua mu ma ͻnam dɛm ntsi obotum atsetsew noara n’adzesuabea ama o’enya Aban no mboa. Mbom, Hadhrat Khalifatul Masih maa ͻdaa edzi pefee dɛ Jama’at no noara kͻ noho mboa wͻ sikasɛm mu, n’akadofo no dze enyigye bͻ afͻr na wosisi asͻrfi na wonnhia dɛ wobisa mboa fi aban nkyɛn.
Obi a wͻtoo nsa frɛɛ no kaa dɛ ͻdͻ nkyerɛkyerɛ a ͻda Jama’at no na Khalifatul Masih ntamu no ne saso nnka no ͻnnyɛ esuadze a ͻdze awerɛfir ba ara da. Nokwar, ndandzemba piinara abͻ iyi enyikam na wͻakasa ho. Huzur ne krato a ͻkyerɛ dɛ Islam ne nkyerɛkyerɛ ka dɛ Jama’at wͻdɛ wobu nsͻrbansɛrba nyinara na ampaara asͻrfi afofor yi begyina hͻ ama dɛm nkyerɛkyerɛ yi no, wͻmaa osii gyina wͻ dawurbͻ dwumadzi mu nkanka ara abɛɛfo efir a wͻfrɛ no “website” no.
Nyankopͻn N’adom ara afe yi afoforfo a wͻabͻdͻn Kuw yi baa German Jalsa Salana no bi; anyɛnkofo a wͻhyɛɛ Tabligh ase na etsipiafo a wofi France na Belgium ͻnye Malta, Estonia, Kyrgyzstan, Kosovo, Albania, Iceland, Lithuania, Hungry, Latvia, Russia, Tajikistan, Bulgaria and Macedonia so baa bi. Ananmusifo a wofi Bulgaria yɛ eduowͻtwe na eduonum ebiasa so begyina Macedonia ananmu. Obiara, a ahͻho ka ho, enyi gyee sunsum mu nkenyan a Jalsa Salana dze maa no. German Jalsa Salana no ridzi adͻntsen wͻ Europe Boka afamu nye Europe amanaman bi so mu. Dɛm ntsi Tabligh dwumadzi no mu retrɛ. Dɛ mbrɛ ͻtse no, hͻn a wͻtoo nsa frɛɛ hͻn ase no enyi gyee mboframba no a wͻdze nsu rekyekyɛ eso wͻrohwɛ mpanyimfo; na dwumapa a woridzi no. Obinom kaa dɛ dɛm dwumadzi yi yɛɛ hͻn nwanwa.
Kristiannyi ewuraba bi a ofi Macedonia a ͻwͻ abͻdzin mapa wͻ Ngyiresi Kasa mu kaa dɛ ne prɛko a ͻreba Jalsa nye no na oehu dɛ Jalsa no wͻatoto no yie papaapa. Ohun dɛ obiara a mbofra ka ho rokͻ hͻnho mboa na iyi maa onyaa enyigye dɛ Jama’at no wͻ gyinabew a ͻkrͻn. Ber a Hadhrat Khalifatul Masih dze ne kasaa kͻͻr ewiei no ohuun mbrɛ Islam asomdwee nkyerɛkyerɛ tse na onyaa atsenka dɛ Jalsa no dze nsesa aba no mu.
Datser bi a ofi Macedonia kaa dɛ n’enyi gyee dɛ nkorͻfo fi amanaman do naaso eyimpamu biara ne mframa mmbͻ wͻ Jalsa hͻ. dza ͻtsee fii nkorͻfo hͻn Jalsa nsɛmka mu no, ͻtsee nka dɛ o’enya ne bea pͻkyee. Ɔyɛɛ Bai’at wͻ da a Jalsa no kͻr ewiei no. Ɔkaa dɛ ͻkͻr Hajj na dza ohunii no faa amanyɛ ho no annyɛ no enyisͻ. Ɔkaa dɛ n’enyi agye nsakyer a Jama’at no dze kyerɛ na ohuun dɛ Jama’at no hyɛ Islam som mu dzen. Ɔdaa no edzi dɛ afei ͻagye Ahmadiyya ato mu na ͻno dze, ͻfa no dɛ ͻyɛ Seeratal Mustaqeem (kwan tsenenee no). Ɔyɛɛ no nwanwa dɛ apolisifo nnyi ehyiadzi kɛse a ͻtse dɛm no ase, ampaara wͻmaa Aban no awerɛhyɛmu dɛ wͻnnkɛfrɛ apolisifo biara. Ɔanntse nsɛm biara a Hadhrat Khalifatul Masih kaa faa dza Maulwinyi biara kyerɛkyerɛɛ mu. Ɔtoto no kͻn dɛ ͻabɛka Jama’at no ho. Ɔkaa dɛ ohuun dɛ Jama’at no wͻ Khalifa no ͻtsee nka dɛ oehu kwan no!
Abrɛntsɛba bi a ofi Macedonia a ͻabɛyɛ Ahmadiyyanyi fofor a ofi Muslimfo adadaw no mu no huu amandze wͻ n’ebusuafo nsa ano. Okehiaa dɛ ofi fie kͻbͻ noho edwaa abosom esia wͻ beebi, ekyir noho kafo so bɛyɛɛ Bai’at. Ɔbaa Jalsa Salana no bi na ͻserɛɛ kwan kenkaan awensɛm bi a Macedoniafo kyerɛwee. Huzur maa no kwan. N’awensɛm no maa ehyiadzi ase hͻ yɛɛ huntuu, ͻbɛyɛ dɛ MTA twee guu efir do. Ne ndze yɛ ahomka dodow ara ma mbofraba gyegyee no do wͻ awensɛm akenkan no mu.
Hadhrat Khalifatul Masih kaa kyerɛɛ hͻn a wͻyɛ Germany Jalsa ho nhyehyɛɛ no dɛ wͻmma ho kwan ma wͻnkenkan hͻn awensɛm kyɛn dɛ wͻbɛkenkan awensɛm wͻ Urdu kasamu. Hadhrat Khalifatul Masih kaa dɛ wonsuo asɛm yi mu dzen. Nyanko bi a ofi Belgium kaa dɛ Jama’at no no dodow nkabͻmu na onuadͻ ͻnye dwuma a wodzi ma adasa no ekenyan no dodow. Ɔdze mfe ebien ahwehwɛ Jama’at no no dwumadzi mu. Ber a ͻtsee Hadhrat Khalifatul Masih ne kasaa no onyaa nsakyer bi wͻ no mu na ͻyɛɛ n’adwen dɛ ͻbɛyɛ Bai’at; na ͻyɛe.
Abrɛntsɛ bi a ofi Ghana a ͻhyɛ Tabligh ase baa Jalsa no bi na ͻnam ehyiakwa bi ntsi oenntum annyɛ Bai’at. Ber a ͻsanee baa ehyiadzi no ase anafua no onyaa enyigye mbordo na ͻkaa dɛ ͻatse Hadhrat Khalifatul Masih ne kasaa no na onnyi siantsir biara a osiiw no kwan dɛ ͻbɛyɛ Ahmadiyyanyi, ntsi ͻyɛɛ Bai’at.
Onua Kristiannyi bi ka dɛ n’enyi agye Huzoor ne nsɛm no ho yie. Osiandɛ wͻakyerɛkyerɛ Islam som no mu yie. Ɔka dɛ ͻpɛ dɛ ͻtse dɛ Kristianfo so wͻkyerɛkyerɛ hͻn so mmu pefee dɛm. Na n’adwen yɛ no dɛ Kristianfo kakraabaabi na wͻtum kyerɛkyerɛ nsɛm mu dɛm. Basia bi so kaa dɛ woesua ndzɛmba afofor pii efi Jalsa no mu na Huzoor ne kasaa no atͻ no do yie. Ɔdze ͻdͻ akyerɛkyerɛ nsɛm a nkyɛ ͻyɛ konsee wͻ n’adwen mu a nyimdziifo pii akyerɛw nwoma pii dze akyerɛkyerɛ mu.
Ahmadiyyanyi bi a ͻwͻ Germany bɛkaa dɛ ͻbabun bi kaa kyerɛɛ no dɛ, nna nkyɛ ͻyɛ Kristiannyi na nkomodzi mu no ͻbͻͻ Nkͻmhyɛnyi (NNN) ne dzin na dza ͻsosow do nyinara kaa ho. Ɔkaa dɛ asͻryɛ ber aso na okitsaa nsu dɛ ͻpɛ dɛ ogyina Huzoor n’ekyir yɛ asͻr. Ɔkaa dɛ, ͻbɛyɛɛ Ahmadiyya bɛyɛ bosom esia ara nye yi. Ɔdɛ ͻkaan nwona a wͻato no dzin Muhammad N’abrabͻ (Life of Muhammad) na obisaa n’asͻr panyin no mu nsɛm bi a woenntum ennyi ano papa biara. Ntsi ͻkaa kyerɛɛ no dɛ ne pɛ efi Kristian som mu na ͻpɛ dɛ ͻyɛ Islam som na ͻsrɛɛ mpaabͻ dɛ dza osiw no kwan biara befi n’akwan mu.
Germany kyerɛkyerɛnyi bi a ofi Lithuania ka dɛ Jalsa no atͻ n’akoma do yie na n’enyi agye ho. Iyi nye da a odzi kan a wͻaba Ahmadiyyafo hͻn nhyiamudzi ase na iyi asesa adwen bͻn a nna ͻwͻ ma Islam nyinara. Onyaa akwanya dze bisaa Huzoor siantsir a yɛbͻ ose (Takbir) na mbom yɛmmbͻ hɛn nsamu. Onyaa nyiano dɛ nsamubͻ yɛ enyigye na mbom Takbir no yɛ enyigye na Nyankopͻn No ntonton nyiara bͻ mu.
Kristian sͻfo bi a ͻyɛ kyerɛkyerɛnyi wͻ esuapͻn Malta mu a wͻakan Anohoba Mɛsia (ANN) no nwoma no bi ka dɛ woenya adwenpa wͻ Jalsa no ho. Ɔkaa dɛ ͻgye dzi dɛ Ahmadiyya yɛ asomdwee som. Ɔtͻͻ “alaissallahu” nkaba no bi na obisaa dɛ dza wͻakyerɛw wͻ do no n’ase kyerɛ dɛn? Ber a wͻkyerɛɛ no ase no ͻkaa dɛ dɛm kasa pͻw yi ͻwͻ dɛ obiara ma ͻbɛn no ber nyinara. Obisaa dɛ ana Jama’at nye Pope edzi nkitaho da anaa? Na woyii no ano dɛ Huzoor ankasa akyerɛw ne nsa ano krataa akama Pope a wͻennya mbuae mpo. Ber a ͻtse dɛm no, no werɛ howee.
Huzoor kasaa faa abakͻsɛm a ͻfa Pope hͻn nkitahodzi ho. Ber a Hadhrat Khjalifatul Masih II kͻͻr nserahwɛ wͻ Europe aman mu no, ͻbͻͻ mbͻdzen dɛ ͻnye Pope benya nkitahodzi na mbua a wͻdze maa no nye dɛ Vetican ahenfie hͻ no wͻreyɛ nsiesie, dɛm ntsi Huzoor nnkenya kwan ehyia Pope. Ber a nsɛmkyerɛwfo bisaa Huzoor faa ͻnye Pope hͻn nkitahodzi ho no ͻkyerɛɛ mu dɛ wͻkaa dɛm dɛ mbrɛ ͻbɛyɛ a onnkotum nye Pope edzi nkitaho. Dadwurbͻ krataa bͻͻ asɛm yi ho dawur na wͻkaa no wͻ ewie dɛ annyɛ a Vetican nnkowie nsiesie no ara da amma Khalifa nye Pope enndzi ehyia.
Ahmadiyyanyi bi a ofi Kyrgyzstan kaa dɛ ͻyɛɛ Bai’at wͻ afe 2007 na osiandɛ wonnyi asͻrdan wͻ no kurow no mu ntsi mber a odzikan a wͻayɛ asͻr wͻ Ahmadiyyafo hͻn asͻrdan mu no yɛ ber a wͻaba Germany yi, na iyi ahyɛ no pɛ dzen.
Nigernyi bi a ͻwͻ Belgium man mu kaa dɛ wͻatse asofo pii hͻn kasaa wͻ ebibirman mu na nsunsuado nye atsenka a woenya efi Huzoor ne kasaa mu no onnyaa bi dɛm da. Ɔyɛɛ Bai’at wͻ Jalsa no ase. Onua bi so a ofi Morocco kaa dɛ ͻakenkan kwan nkyerɛkyerɛ mu a nyimdziifo pii akyerɛw nye dza Anohoba Mɛsia (ANN) na ne Khalifafo akyerɛw na Ahmadiyyafo hͻn nwoma no mu dͻ yie. Ɔgyee Ahmadiyya too mu na ͻyɛɛ Bai’at wͻ nhyiamu yi ase na n’ebusuafo so yɛɛ Bai’at.
Muslim nyɛnko bi a ofi Niger kaa dɛ nna ͻdwen dɛ sɛ nkyɛ Nkͻmhyɛnyi bi wͻ dɛ ͻtsena ase afebͻͻ a ͻno ͻwͻ dɛ ͻyɛ Nkͻmhyɛnyi Krͻnkrͻn Muhammad (NNN) na nnyɛ Yesu Kristo bi a. Ber a ͻhyiaa Ahmadiyyafo wͻ Belgium no, onyaa no nsɛm ano nyiano. Na ohun Khalifat ho nhyira na adom nna ohun dɛ dza Jama’at Ahmadiyya ka biara wͻ ngyina do wͻ Kuran nye Hadith mu. Ɔyɛɛ Bai’at wͻ Jalsa no ase wͻ da a odzi ewie no. Onua bi a ofi Kyrgyzstan kaa dɛ nna ͻdwen dɛ ana obenya kwan nye Khalifa bi edzi ehyia wͻ no nkwa nda mu anaa? Na nda yi a ͻahyia no yi ama ne gyedzi etu kafo. Huzoor serɛɛ dɛ yɛmbͻ mpaa mma Kyrgyzstanfo osiandɛ wͻwͻ ahokyer kɛse mu. Nyankopͻn mma Mullahfo a wͻdze ͻhaw aba no ntseaseepa anaa Ɔntwe hͻn aso.
Ahmadiyyanyi fofor bi a ofi Lebanon kaa dɛ ber bi, ne ba a woedzi mfe duebiasa bisaa no dɛ, nda a odzi ewie no bɛyɛ dɛn? N’egya no buaa no dɛ obɛyɛ mfe mpempem na ne ba no annye no annyɛ adwen na ͻkaa dɛ dɛm ber noara na yɛwͻ mu yi. Ɔkaa kyerɛɛ n’egya dɛ Dajjal no nye nyimpa bi ne dzin na mbom ͻyɛ nkorͻfo bi. N’egya no bisaa no kwan a ͻfaa do nyaa dɛm nyimdzii no na abofra no buaa dɛ, da kor bi ohun MTA efir no wͻ Germany na siesie yi dze ͻhwɛ no aber nyinara. Nna n’egya nntse German kasa ntsi abofra no hyɛɛ ase kyerɛkyerɛɛ no asɛm biara a wͻka no wͻ MTA kasafir no do no mu. Da kor bi n’egya no bo fuuw na ͻkaa kyerɛɛ ne ba no dɛ mma ͻnnhwɛ MTA no bio, mbom wͻ n’akoma mu no nsɛm biara a Ahmadiyyafo ka no ohu no dɛ ͻyɛ nokwar. Na ekyir no egya no hyiaa Ahmadiyyafo ebien bi a wͻkyerɛkyerɛɛ nsɛm mu kyerɛɛ no na ohuun dɛ dza ne ba no kaa biara yɛ nokwar na ͻbɛyɛ Bai’at.
Onua bi fi Bosnia kaa dɛ woenya atsenka wͻ Jalsa no ho na ͻserɛ mpaabͻ dɛ sɛ ͻsan kͻ no kurow mu mpo a n’atsenka no bɛtsena hͻ afebͻͻ. Onua bi a ofi Kyrgyzstan a Huzoor hyɛɛ no nsew wͻ Jalsa no ase yɛɛ Bai’at. Mber kakra a abɛsenkͻ nna ͻkͻr Hajj na ͻkaa kyerɛɛ Huzoor dɛ ͻdze Zamzam nsu no bi a ͻpɛ dɛ ͻdze ma Huzoor ber biara a obehyia no. Ɔkyerɛɛ ͻdͻ kɛse na ͻdze nsu no maa Huzoor.
Onua bi fi Algeria ber bi ͻtsee nkorͻfo ebien bi a na wͻreka nyamesɛm na wͻkasaa faa Mahdi no ho. No bo fuuw kɛse na ͻdween dɛ nkorͻfo no abͻ mbusu, dɛm ntsi ͻnye hͻn yɛɛ nyiyiano a nna obu biara nnyi mu wͻ ahyase no. Na ͻhuun dɛ nsɛm biara wͻ ngyinado a n’ano yɛ dzen. Ɔkͻr do bisaa Arabic TV kasafir bi na obisaa hͻn faa Ahmadiyya kuw no ho. Na wͻbuaa no dɛ ekyir no wͻbɛfrɛ no wͻ tsetsefon do. Ber a wͻfrɛɛ no no, wͻkaa dɛ Ahmadiyyafo yɛ kafirfo. TV kasafir no frɛ no dabiara na wosido dɛ Ahmadiyyafo yɛ kafirfo naaso otsie Ahmadiyyafo no a ohu no dɛ wͻyɛ nokwarfo naaso sɛ otsie Mullahfo no a nna n’adwen mu ayɛ no konsee. Ɔkͻr do ara kenkan nwoma faa nsɛm yi ho ara kɛpem dɛ n’adwen mu tseew no. Ber a ͻbaa Jalsa yi ase no ohun amanaman ahorow do nyimpa pii no, obisaa noho dɛ bɛyɛ dɛn na dɛm nyimpa nyinara bɛyɛ atorfo ma Mullah kortsee ayɛ nokwarfo. Dɛm ntsi onyaa akomatͻyɛmu na ͻyɛɛ Bai’at.
Onua bi a ofi Niger kaa dɛ na ͻnnyɛ Ahmadiyyanyi na ͻbaa Jalsa yi ase no n’adwen asesa na wͻayɛ Bai’at abɛyɛ Ahmadiyyanyi na ͻdze hoahoa noho dɛ wͻabɛka Kuw yi ho. Onua kor bi so a ofi Bosnia kaa dɛ ber a nna ͻnnyɛ Ahmadiyyanyi no nna ͻyɛ bͻn biara. Woenya nsakyerpa wͻ Jalsa yi ase na ͻpɛ dɛ onya abrabͻpa korangyeen ma obisaa mpaabͻ wͻ iyi ho. Ɔbaabun bi a ofi Turkey yɛɛ n’adwen dɛ ͻnnkɛyɛ Bai’at wͻ ndaasada wͻ Jalsa no ase. Na ber a wͻreyɛ Bai’at no onyaa pɛ dɛ ͻbɛyɛ Bai’at no bi na osuii ara yie na ͻkaa dɛ ohun dɛ Tum bi a enyi nnhu na ͻatwe no kͻ Bai’at no ho. Onua bi a ofi Niger kaa dɛ nna ͻnnyɛɛ n’adwen dɛ ͻbɛyɛ Bai’at na ber a ohun ͻdͻ a Ahmadiyyafo wͻ dze ma Khalifa no n’adwen sesaa dɛ ͻbɛyɛ Bai’at.
Nyimpa dodow eduosia esoun (67) na wͻyɛɛ Bai’at wͻ Germany Jalsa no ase afe yi mu. Wͻ ntotoee afamu no, afe yi MTA hɛn no wͻdze sii abowano wͻ petee mu na dɛmara so na hͻn a wͻkyerɛ kasa ase no so nna wͻwͻ abowano. Ɔnam dɛm ntsi nna mfir no mu yɛ kyekyekyekye kakra. Mowͻ awerɛhyɛmu dɛ wͻbɛyɛ no yie. Dɛmara so na mbasiafo mu hͻ no nna nkyerɛase no no mu nnda hͻ yie ntsi nna ͻwͻ dɛ wͻba mbanyinfo no mu na wobetsie dza mereka no. Mber yi mu yi, yetum tsie kasa kyerɛasee wͻ tsɛtsɛfon do mpo na dɛm UK jama’at no yɛ. Akasafir no nna oye dze naaso nna ndze no si ekyir a sɛ Khalifa kasa a ne ndze no si ekyir bio. Iyinom nye sintͻ nketsenketse, hom mbͻ mbͻdzen dɛ hom beyi efi hͻ.
Nyame N’adom ara mbayin 3100 na mbasiafo 3700 na wͻyɛɛ edwuma wͻ Jalsa no ase. Khuddamfo bɛyɛ 100 na wͻyɛɛ edwuma dͻnhwer duanan dabiara wͻ beebi a wͻyɛɛ Jalsa no dze yɛɛ nsiesie. Hͻn a wͻhwɛɛ ahͻho no bͻͻ mbͻdzen sen nkan no, na nna nsu wͻ edzidzibea biara. Ɔyɛ Nkͻmhyɛnyi (NNN) ne nkyerɛkyerɛ dɛ nsu bɛbɛn edzidzibea. Paanoo (roti) no so nna odzi mu yie. Huzoor noara dzii bi na nna ͻretweͻn dza ahͻho a wͻbaa Jalsa no bɛka afa ho. Ahotsewee so nna oye na mfir a wͻdze satse nyimpa no so dzi mu yie. Mbaabun, mbasiamba na mbofra som Anohoba Mɛsia n’ahͻho yie. Yɛserɛ dɛ Nyankopͻn bɛma hͻn akatuapa na Wͻama woenya kankͻ wͻ hͻn nokwardzi mu.
Afei Huzoor bͻͻ no dawur dɛ Canada, Belgium na Ireland reyɛ hͻn Jalsa Salana dɛm da noara. Nyankopͻn mboa hͻn ma wonya Jalsa nokwar sunsum no nye nhyiamu noho mfaso. Na dɛm Jalsa ahorow nyinara nkͻ ewie pa. Dɛmara so na nda da yi, UK Khuddamfo so reyɛ hͻn nhyiamu (Ijtimah), Nyankopͻn mboa mbabayin yi ma wͻnhyɛ hͻn botae ma. Okuwba biara nhu dɛ Jalsa no botae nye dɛ yɛbenya Nyankopͻn N’enyigye na yeenya sunsum mu mpontu nna subanpa mu kankͻ. Obiara mma n’adwen nkͻ nsɛm yi do yie.
3. Mr. Rasheed Possible Essuman Sahib